ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထိတ်လန့်မှုခလုတ် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
ဒီဟာကသင့်အတွက်အသုံးဝင်မလားမသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသွေးဆောင်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အခါငါပြန်သွားတော့မယ်။ ငါထင်တာကတော့ငါကိုယ်တိုင်နှင့်အတူရှိခဲ့သောအတွင်းပိုင်းပြောဆိုမှုမျိုးဖြစ်သည်။
သင်ဤ၏အဆုံးကိုဖတ်ခြင်းနှင့်နေဆဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ FAP ချင်နိုင်လျှင်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မသင်တတ်ပြီးပြီးတော့ရပ်တန့်နှင့်သင့်ဘဝနှင့်အတူပေါ်ဆက်လက်အခမဲ့ခံစားရစဲသွားတော့ထားပါတယ်ခံစားရလျှင်။ ပြန်ကြွလာလျှင်သင်တို့ကိုရှေ့ဦးစွာ မှစ. နောက်တဖန်မစတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဘောင်းဘီထဲမှသင်၏ fucking လက်ကိုယခုပင်ယူပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုမဖတ်မီမိမိကိုယ်ကိုထပ်မံထိတွေ့ပါ၊
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင်းကြီးတွေ mofo ၏ဆင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။ ယင်း၏ကြာသမျှ, သင့် quad ကွေး, သင့်အသက်ရှုကိုင်ထားပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်း Play ။
ငါ့နောက် 10 ကြိမ်ပြန်လုပ်ထို့နောက် 10 အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါနဲ့အနားယူ:
ညစ်ပတ်ပေရေ၊ ညစ်ပတ်ပေရေ၊ ငါဒီထက်ပိုအားကောင်းတယ် ငါ PMO မှရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မယ်။ "
သင့် ဦး နှောက်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဘာမှမ မင်းဒါ ဦး နှောက်က dopamine လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျသော်လည်းထက်ပိုဖြစ်ကြသည်, သင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဟော်မုန်းထက်ပို, သင်ကိစ္စအပေါ်စိတ်ထဲဖြစ်ကြသည်။ သင်၌ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြပါ၊ သင်၏ထက်သာလွန်ကြောင်းသက်သေပြပါ။
သင်အရှုံးပေးလိုက်လျှင်အရာရာကိုသင်စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ADHD၊ အချိန်ဆွဲခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များပြန်လာလိမ့်မည်။
သင်နှစ်သက်သောထိုမိန်းကလေးနှင့်သင်၏စွမ်းအင်တိုးတက်မှု၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ သင်၏ယုံကြည်မှု၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်၊ သင်၏အကျင့်၊ သင့်စွမ်းအား၊ ကြည်လင်သောအသားအရေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ။
ဘဝကတိုလွန်းတယ် နောင်ဘဝရှိမရှိဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဘယ်သူမှအမှန်တကယ်မသိပါဘူး။ အဲဒီမှာရှိမယ်လို့ငါတကယ်မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်မယုံဘူး ငါယုံကွညျစိတျခနြိုငျသူမြားကိုမနာလို။ မရှိဘူးလို့ယူဆရင်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ အဖြစ်မှန်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ၊ ကမ္ဘာမြေသည်နှစ်ပေါင်း ၄ ဘီလီယံမကိန်း ရှိ၍ သင်နှစ် ၁၀၀ အောက်၌တည်ရှိနေနိုင်သည်။ သင်မမွေးဖွားမီကထာဝရတည်ရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ သင်သေဆုံးသောအခါအခြားတည်ရှိမှုမရှိသောအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ဒါကမင်းကိုနောက်ဆုံးမင်းလိုနေ့တိုင်းအဲဒီမှာထွက်ပြီးဘဝကိုထွက်သွားဖို့လှုံ့ဆော်မပေးဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမသိဘူး။ မင်းအသက်တာကိုအသုံးချပါ၊ မင်းသိပ်မကြာဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီကိုကြည့်ပါ http://www.youtube.com/watch?v=BOksW_NabEk
သငျသညျ fap နေလျှင်သင်ထုံဖြစ်လာ, မရှိ။ သင်ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်း၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ သင်၏ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ခြင်းစသည့်အခါကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြား PMOing များကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြုန်းတီးပစ်မည်နည်း။
ငါမလွယ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် .. တကယ်တမ်းကျတော့ fuck ဆိုတဲ့။ ဆင်ခြေရှာတာကိုရပ်တန့်ဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုတာသတိထားမိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမယ်။ NoFap လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါရိုးရှင်းပါတယ်။
သို့တိုင်ဖတ်နေ? စတင်ချိန် မှစ. နောက်တဖန်စတင်ပါ။
သို့တိုင် FAP လိုသလား?
မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဘဝကိုလျှင်မြန်စွာ dopamine အလျင်အမြန်နှင့်နောင်တရရန်သင်၏ဘဝကိုစွန့်လွှတ်လိုပါကကျွန်ုပ် guest ည့်သည်ဖြစ်ပါ။ မင်းကသနားစရာကောင်းတယ်
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတ်တလန် button ကို မှ NoFap